ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ကို Setup လုပ်ငန်းစဉ်
ကမ်းလွန်အကောင့် Setup ကို - လုပ်ပါဖို့ဘာ
သင့်ရဲ့တက် setting ထဲမှာပထမဦးဆုံးခြေလှမ်း ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့် အတွေ့အကြုံပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဆွေးနွေးရန်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျတယ်လီဖုန်းသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းကနေတဆင့်ဒီလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အထူးသ, သင်ကအကြံပေးနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုအဘို့ဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်အရေအတွက်ကိုသို့မဟုတ်ပုံစံကိုသုံးနိုင်သည်။
ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, ငါတို့သည်သင်တို့လူကြိုက်များတရားစီရင်မှုအတွက်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်ရန်များကိုလိုအပ်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုဖုံးလွှမ်းနိုင်။ ပညာရှင်များ၏ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့နီးပါးမည်သည့်နိုင်ငံတွင်အသစ်တခုဘဏ်အကောင့်ဖွင့်နှင့်အတူထောက်ခံမှုပေးနိုင်ပါသည်။
ဒါဟာအများဆုံးကမ်းလွန်ဘဏ်များအနေနဲ့အရည်အချင်းပြည့်မီ introducer တောင်းမည်သတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဒါကပြီးသားဘဏ်နဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြီးသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုကမ္ဘာအနှံ့အများအပြားဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများအနေနဲ့အရည်အချင်းပြည့်မီ introducer ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးကနိုင်ငံခြားဘဏ်အကောင့်အဆိုပါလက်မှတ်ထိုးသူသို့မဟုတ်အကောင့်အကျိုးခံစားခွင့်ဟာနိုင်ငံသားသို့မဟုတ်နေထိုင်သူမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အတွက်ဘဏ်အကောင့်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ကျနော်တို့လေ့ကြောင့်ဖောက်သည် privacy ကိုသူတို့ရဲ့တင်းကျပ်ဘက်တော်သားမှဘဏ်လုပ်ငန်းဟေဗန်အဖြစ်ဤအတရားစီရင်မှုရည်ညွှန်း။ သင်တို့သည်ဤအဆင်သင့်နိုင်ငံခြားတရားစီရင်မှု၏တဦးတည်းအနေနဲ့ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ, သင်ဘဏ္ဍာရေးလျှို့ဝှက်၏သိသာထင်ရှားသောရဖို့။
ဒါကြောင့်သင်မည်သို့ privacy ကိုတိုးမြှင့်သလဲ? တိုတိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များသောအားဖြင့်ကျနော်တို့ထူထောင်ကြောင်းပုဂ္ဂလိကကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများသည်၏နာမ၌၎င်းတို့၏အသစ်ကအကောင့်ဖွင့်လှစ်။ နိုင်ငံခြားဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ဘို့အဓိကအကြောင်းရင်းများသီးသန့်တည်ရှိမှုနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုဖြစ်ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအိမ်ခြံမြေစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအဖြစ်နောက်ထပ်အကြိုးခံစားခှငျ့အဖြစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်စီးပွားရေးရှိပါသည်။ ဤရွေ့ကားအကျိုးကျေးဇူးများကိုမကြာခဏထိုကဲ့သို့သောကမ်းလွန် LLC အဖြစ်သင့်လျော်သောဥပဒေရေးရာဥပဒေရေးရာ tool ကိုလိုအပ်သည်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှာဖှသေူမှလူကြိုက်အများဆုံးနှင့်အကျိုးရှိသော နေးဗစ် LLC.
အကောင့်ဖွင့်သည့်အခါကျုံးနိုင်ငံခြားဘဏ်များအလွန်ဆင်တူလိုအပ်ချက်များကိုရှိသည်။ ဘဏ်များကိုနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူလိုက်နာနိုင်ရန်အတွက်ဒါလုပ်ပါ။ ဒါဟာသင်, မှတ်ပုံတင်နှင့်ကနဦးအပ်ငွေနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များပါဝင်သည်။ သင့်ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းပေါ် မူတည်. ဘဏ်သည်သင်၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်, ကိုးကားခြင်းနှင့်နေထိုင်ရာအထောက်အထားမိတ္တူအဘို့သင့်ကိုမေးလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ကမ္ဘာ့အပြင်းထန်ဆုံးနိုင်ငံခြားဘဏ်များမှတံခါးကိုဖွင့်နိုင်ကြသည်။ ကြောင့်လယ်ပြင်၌ကျယ်ပြန့်အတွေ့အကြုံနှင့်အသက်ရှည်ဖို့ကျနော်တို့ဆွစ်ဇာလန်ရဲ့အကြီးဆုံးနှင့်အင်အားဘဏ်များများစွာသောခွင့် introducers ဖြစ်ကြသည်။
ပထမဦးစွာသင်ထားတဲ့နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရန်။ ထို့နောက်သင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏နာမ၌ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ပြီး။ ဒါကပုဂ္ဂလိကကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီ၏နာမ၌ထက်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနာမ၌သင်၏အကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်။ သငျသညျကိုတိုက်ရိုက်သင့်ရဲ့နာမကိုအမှီပိုင်ဆိုင်မှုရှိတဲ့အခါသူတို့ကတရားစှဲတာပိုမိုလွယ်ကူပစ်မှတ်ဖြစ်ကြသည်။
သငျသညျနှစျခုနိုင်ငံခြားငွေတရားစီရင်မှုအသုံးချသည့်အခါအပြင်, သငျသညျတိုးချဲ့ဘဏ္ဍာရေး privacy ကိုရရှိနိုငျသညျ။ သင်တဦးတည်းနိုင်ငံတွင်သင့်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရန်။ ထိုအခါသင်သည်သင်၏ဘဏ်အကောင့်အခြားဖွင့်လှစ်။ အမှန်ကတော့, သင်အားသာချက်နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်ရဲ့ privacy ကိုဥပဒေများကိုယူပြီးနေကြသည်။ ကျေးဇူးအလျှင်းမပြုဘဲကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်းတရားစီရင်မှုမှာ, အခြားသူများအားဖောက်သည်အကောင့်အချက်အလက်များကိုလေးနက်ပြစ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အခြားအတရားစီရင်မှုအတွက်ကြောင့်လည်းသင့်ကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ဆိုင်မှုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ပေးသူတစ်ဦးဦးအနေနဲ့ပြစ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီပေါင်းဘဏ်အကောင့်ပေါင်းစပ်မျက်စိ prying မှသင်၏စည်းစိမ်ဥစ္စာကိုကာကွယ်ရန်အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကဖတ်, ကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်း Beginner ရဲ့လမ်းညွှန်ဘယ်နေရာမှာသင်ကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်းအပေါ်အခြေခံအချက်အလက်တွေကိုမြင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာန်ဆောင်မှုများကော်မရှင် (FSC) သို့မဟုတ်နိုင်ငံသို့မဟုတ်ဒေသအတွက်ညီမျှသောခန္ဓာကိုယ်တစ်ဦးချင်းစီကဘဏ်ကိုထိန်းညှိ။ နိုင်ငံတကာမှာ, စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး (OECD ၏), ဥရောပသမဂ္ဂနှင့်အခြားအဖွဲ့အစည်းများအဘို့အဖွဲ့, အကြံပြုချက်များနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုထွက်ထားတော်မူ၏။ သူတို့ကအမျိုးမျိုးသော FSCs ပြဋ္ဌာန်းရန်ရန်အဘို့အရာအရပျ၌ရှိကြ၏နှင့်ဘဏ်များကိုလိုက်နာရန်။
ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့်အခါဤတွင်အချို့သောဘုံပစ္စည်းများမကြာခဏလိုအပ်သောဖြစ်ကြ၏ ကမ်းလွန်ဘဏ်။ အဆိုပါဘဏ် "ကြောင့်လုံ့လဝီရိယ" ဒါမှမဟုတ် "သင်၏ဖောက်သည်ကိုသိပါ" သို့မဟုတ် KYC အတွက်လိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံဤအချက်အလက်တောင်းဆိုထားသည်။
1 ။ ဘဏ်အကောင့်လျှောက်လွှာ။
2 ။ လက်မှတ်ကတ်
3 ။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၏ Notarized မိတ္တူ
4 ။ ထိုကဲ့သို့သော utility ကိုဥပဒေကြမ်းအဖြစ်လိပ်စာသက်သေပြ,
5 ။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုအနည်းဆုံးနှစ်နှစ်နှင့်အတူဘဏ်လုပ်ငန်းမှာကြားဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ပါတယ်ဘယ်သူကိုနှင့်အတူဘဏ်ထံမှဘဏ်ကိုးကားစရာပေးစာ
6 ။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုအနည်းဆုံးနှစ်နှစ်နှင့်အတူပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိခဲ့ပါတယ်ဘယ်သူကိုနှင့်အတူစာရင်းကိုင် / ရှေ့နေချုပ်ကနေ Professional ကကိုးကားစရာပေးစာ
ဒါကလုံးဝမအနေနဲ့ပြည့်စုံစေ့စပ်စာရင်းအားဖွငျ့ဖွစျသညျ။ အဆိုပါ FSC နှင့် OECD နှင့်ဘဏ်, သူ့ဟာသူ, နောက်ထပ်လိုအပ်ချက်များရှိစေခြင်းငှါ။ တနည်းကား, ဒီလူအပေါင်းတို့သည်ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်၏သမာဓိနှင့်တရားဝင်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ရာဇဝတ်မှုတားဆီးကိုကူညီဖို့ရည်ရွယ်သည်။ ဘဏ်အရာရှိတွေကနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်စာရွက်စာတမ်းများစစ်ဆေးနှင့်တယ်လီဖုန်းသင်ခိုင်လုံသောကိုးကားပေးအပ်ခဲ့ကြစေရန်ခေါ်ဆိုစေမည်။
ဥပမာအားဖြင့်, သူတို့သည်သင်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနေအိမ်သို့အတည်ပြုရန်ချင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်သင်ကထိုကဲ့သို့သင်တို့၏နာမအတွက် utility ကိုဥပဒေကြမ်းအဖြစ်သက်သေအချို့ကိုအမျိုးအစားလိုအပ်ပါတယ်။ မည်သည့်စာရွက်စာတမ်း၏သဘောသဘာဝအပေါ် မူတည်. notarization လိုအပ်သောသက်သေပြလိမ့်မည်။ အချို့နိုင်ငံများတွင်လည်းအကောင့်ဖွင့်မီမှတ်ပုံတင်မျိုးစုံကိုပုံစံအမျိုးမျိုးလိုအပ်နိုင်ပါသည်။
သင်တစ်ဦးကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်တဲ့အခါမှာ, သင်အဲဒီလိုကူညီပေးမည့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ငှားရမ်းနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်းက, ဥပမာ, ဒီ service ကိုပေးသည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သင်တစ်ဦးချင်းစီတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်ဘဏ်ပျပိုငျခှငျ့တိကျသောလိုအပ်ချက်များသုတေသနဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်။ Quora အကြောင်းကိုခန့်မှန်း 14,600 ကမ်ဘာပျေါတှငျဘဏ်။ သင်သည်သင်၏လက်ပေါ်မှာအချိန်တွေအများကြီးရှိသည်မဟုတ်လျှင်ဒီတော့အများစုကအကူအညီတွေ့ကြုံရအကောင်းဆုံးရဲ့သဘောတူလိမ့်မယ်။
ဘဏ်လုပ်ငန်းကိုးကားဘို့သကဲ့သို့, ကမ်းလွန်ဘဏ်သင်နှင့်သင့်ဘဏ်အကြားကျေနပ်ဆက်ဆံရေးသက်သေအထောက်အထားချင်ပေမည်။ ထိုသို့သောနေ့စဉ်ခွင်အဖြစ်သတင်းအချက်အလက်ချင်ပေမည်။ အများဆုံးဖြစ်ရပ်မှာတော့ဘဏ်ကြေညာချက်၏တစ်ဦး၏တစ်နှစ်တန်ဖိုးရှိမှခြောက်လလောက်သငျ့သညျ။ သင့်ရဲ့ပြည်တွင်းဘဏ်ကိုလည်းပုံမှန်အားဖြင့်သင်သည်ကောင်းမွန်သောရပ်တည်မှုတွင်တစ်ဦးကို client ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရည်ညွှန်းတဲ့စာတစ်စောင်ကိုပေးနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါကမ်းလွန်ဘဏ်သင်တို့ကိုလည်းလုပ်ဆောင်သွားရန်စီစဉ်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာ၏သဘောသဘာဝနှင့်အမျိုးအစားနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်ချင်ပေမည်။ ဘဏ်များငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်အခြားတရားမဝင်လှုပ်ရှားမှုများရပ်တန့်ဖို့ဖိအားတိုးပေးဖို့အောက်မှာခဲ့ကြပြီ။ အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းအကောင့်အတွက်ရန်ပုံငွေသတင်းရပ်ကွက်များကမှတ်သားနိုင်အောင်ထို့ကြောင့်ဤအပိုဆောင်းစာရွက်စာတမ်းများမေတ္တာရပ်ခံထားသည်။ သူတို့ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်မပါလျှင်သူတို့ဒဏ်ငွေသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ဘဏ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်အရှုံးခံရနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုသင့်အဘို့အထူးခြွင်းချက်စေရန်မျှော်လင့်ထားပါဘူး။
အင်္ဂလိပ် Is သင်သည်သင်၏ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်ရန်စီစဉ်ထားသောတိုင်းပြည်များ၏တရားဝင်ဘာသာစကားဖြစ်သနည်း ဒါဟာမဖြစ်လျှင်သင်တရားဝင်ဘာသာစကားမှာသင့်ရဲ့စာရွက်စာတမ်းများ certified ရရှိထားပြီးဘာသာပြန်ချက်များကိုများကိုနိုင်ပါသည်။
သငျသညျမွငျနိုငျသကဲ့သို့, ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့် setup လုပ်ငန်းစဉ်ပြည်တွင်းအကောင့်ဖွင့်လှစ်ခြင်းထက်ကွဲပြားခြားနားသည်။ အများစုမှာဘဏ်များလူကိုယ်တိုင်တက်ကိုပြသရန်သင့်အားလိုအပ်သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ငါတို့မကျင့်သောသူမြားကိုငါသိ၏။ ခရီးသွားမလိုအပ်ပါဘူးသူများသည်, သင်ဖြစ်ကြသည်ဟုပြောသူကိုဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြဖို့အပိုစာရွက်စာတမ်းများလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးရန်ဖြစ်ပါသည်။ သင်သည်သင်၏ပိုက်ဆံတောင်းပေါ်လာသည့်အခါ, သင်ကသင်တစ်ယောက်တည်းသာသွားပါလိမ့်မယ်သိသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်; သူတို့သင်မလုပ်ပဲသူကိုမပေးသူတစ်ဦးဦး။ ထို့ကြောင့်တက်ရှေ့သင့်လျော် ID ကိုပေးအသုံးပြုပုံသင်နှင့်ဘဏ်တကယ့်ကိုသင်ကြောင်းကိုသိရကြလိမ့်မည်။
လုပျထုံးလုပျနညျးဘဏ်နှင့်တိုင်းပြည်အားဖြင့်ကွာခြားကတည်းကကအကောင့်ဖွင့်မဖွင့်ရှေ့တော်၌အချို့သောကိစ္စများရှင်းလင်းဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ သငျသညျပိုက်ဆံပမာဏကြီးမားတဲ့လွှဲပြောင်းအတွက်ကန့်သတ်ရှိပါတယ်ဘယ်မှာသိလိုပါလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်ဤကဲ့သို့သောခွင့်ပြုချက်များအတွက်နည်းစနစ်များသတိထားဖြစ်ချင်ပါလိမ့်မယ်။ သင်တို့သည်လည်းဘဏ်ဖွင့်ဒက်ဘစ်ကဒ်နိုင်ငံတကာမှာအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်လျှင်ထွက်ရှာတွေ့ချင်ပါလိမ့်မယ်။ ကလက်လီဝယ်ယူမှုနှင့် ATM စက်များတွင်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်အလုပ်လုပ်ပါသလား သင်အွန်လိုင်းကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ပေးချေရန်အဒက်ဘစ်ကဒ်ကိုသုံးနိုင်သည်လျှင်ထွက်ရှာပါ။
အများအပြားကမ်းလွန်ဘဏ်များပူဇော်အတိုးနှုန်းကိုအမေရိကန်ဘဏ်များသည်သောသူတို့ထက်တစ်ခါတစ်ရံပိုမိုမြင့်မားဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါကြေးအဆောက်အဦများလည်းအနည်းငယ်ပိုများနိုင်ပါသည်။ ကြောင့်လုံ့လဝီရိယဖျော်ဖြေ၏တစိတ်တပိုင်းသောဘဏ်စွဲချက်အားလုံးအခကြေးငွေစဉ်းစားနေပါတယ်။ သငျသညျလွှဲပြောင်းအများကြီးလုပ်ဖို့စီစဉ်မထားဘူးဆိုရင်, အခကြေးငွေအများကြီးခြားနားအောင်လုပ်ပေးမည်မဟုတ်ပါ; ဒါပေမယ့်သူတို့တစ်တွေအလွန်တက်ကြွသောဘဏ်အကောင့်နှင့်အတူတက် add နိုင်ပါတယ်။
ယင်းအဖွဲ့အစည်းသည်သင်၏လုပ်ငန်းများ၌ပြီးပါက ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့် setup ကိုစာရွက်စာတမ်းများ, သူတို့ပုံမှန်အားအီးမေးလ်ကနေတဆင့်ကိုသင်အတည်ပြုချက်ပေးပို့ပါ။ အဲဒီအခြိနျမှာဘဏ်တစ်ဝါယာကြိုးလွှဲပြောင်းဘို့စောင့်ဆိုင်းပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကနဦးအပ်ငွေကိုလက်ခံရရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်သူတို့သင့်အကောင့်အသစ်ကိုသက်ဝင်ပါလိမ့်မယ်။ တချို့ကကုန်ကျစရိတ်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ကြေး, အပိုဆောင်းဘဏ်ကတ်များ (ရှိလျှင်), ဆက်သားနှင့်အခြားကုန်ကျစရိတ်များပါဝင်သည်။ တနည်းကား, ဤကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ပေးသူအကြားကွဲပြားပါလိမ့်မယ်။
ဘဏ်အကောင့်တက်ကြွသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်, သင်ပုံမှန်အားဖြင့်သင်၏ user account နဲ့ password ကိုဖန်တီးရန်အွန်လိုင်း access ကိုရရှိကြသည်။ သင်တို့သည်လည်းဤကဲ့သို့သောတစ်ခုလွယ်ကူသော-to-အသုံးပြုမှုကိုဒစ်ဂျစ်တယ်လက်မှတ် device ကိုအဖြစ်ပစ္စည်းများလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ သငျသညျရတဲ့အခါ, သငျသညျ access များအတွက်လုံခြုံကုဒ်သင့်အကောင့်လက်ကျန်ငွေထုတ်ပေးမယ့်ဒစ်ဂျစ်တယ်စက်ကိုမြင်ရလိမ့်မည်။ အများဆုံးဘဏ်များနှင့်အတူသင်အလွယ်တကူ, ပုဂ္ဂလိကပိုင်နဲ့လုံလုံခြုံခြုံ, လျင်မြန်စွာအရောင်းအလုပ်ဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အကောင့်ကို operating နှင့်အွန်လိုင်း access ကိုအသုံးချဖို့လမ်းဆင်းကို အသုံးပြု. ဘဏ်ဖို့ကအလွန်ဆင်တူစေသည်။
OffshoreCompany.com ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်ရန်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကလူထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကူညီပေးခဲ့တယ်။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့ပုဂ္ဂလိကစတော့ရှယ်ယာပွဲစားအကောင့်တည်ထောင်ရန်ကူညီပေးသည်။ ထို့အပြင်ဤအဖွဲ့အစည်းသည်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအစီအစဉ်များကိုပေးသောဦးဆောင်ကုမ္ပဏီများတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ညာဘက်ကမ်းလွန်တရားစီရင်မှုနှင့်အတူဆက်ဆံရေးရှိတယ်ဆိုတာယုံကြည်စိတ်ချရသောပံ့ပိုးပေးကြသည်။ သငျသညျကမ်းလွန်ဘဏ်၌မဆက်ဆံနှင့်ရန်ဆန္ဒရှိသင့်တယ်, သင်ပိုင်ခွင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်အောင်သေချာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအသိပေးပါစေ။ ဒါကအကြှနျုပျတို့သညျပွုပါကူညီပေးနိုင်ပါသည်အရာဖြစ်တယ်။
နိုင်ငံခြားရေးဘဏ်များကိုမကြာခဏကြောင့်အမေရိကန်နှင့်ကနေဒါဘဏ်များပိုကောင်းအတိုးနှုန်းကိုဆက်ကပ်။ Plus အားအများအပြားကမ်းလှမ်းမှုကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကောင့်န်ဆောင်မှုစီမံခန့်ခွဲ။ privacy ကိုထည့်သွင်းခြင်းကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်းမှတဦးတည်းအကျိုးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်ကျေးဇူးအလျှင်းမပြုဘဲနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများများအတွက်အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားဘဏ်အကောင့်ဖြည့်ထည့်ပေါင်းပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှု tool ကိုငွေရေးကြေးရေးအကာကွယ်ပေးကိုယ့်ကိုကိုယ်ယူမယ့်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်သာသင့်ကိုယ်ပိုင်နာမတော်၌တစ်ဦးကမ်းလွန်အကောင့်ခဲ့လျှင်သင်ကာကွယ်ထားကြသည်မဟုတ်။ အဲဒီဒေသခံတစ်ဦးတရားသူကြီးကရန်ပုံငွေများကျော်ဖွင့်ရန်သင့်အားအမိန့်ပေးနိုင်သည်။ တစ်ဦးကမ်းလွန် LLC သို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုယုံကြည်မှုအတွက်သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုကိုင်ပြီး, သို့သော်စားပွဲပြန်သွားလေ၏။ ဒီတော့လုပ်နေသင့်အကောင့်, လုရာမှပြိုင်ဘက်ရဲ့ရှေ့နေတားဆီးနိုင်ပါတယ်။
ရေခြားမြေခြားဘဏ်လုပ်ငန်း, အ Bottom Line
တစ်ခုကပြည်ပဘဏ်အကောင့်ကိုရိုးရှင်းစွာကိုယ်ထက်အခြားတိုင်းပြည်တစ်ပြည်တွင်အခြေစိုက်နေတဲ့ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့်အတူဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုလိုတယ်။ အမေရိကန်များအတွက်ရေခြားမြေခြားဘဏ်လုပ်ငန်းပုံမှန်အားဖြင့်လုံခြုံပြီးလူကြိုက်များဘဏ္ဍာရေးဆိပ်ကိုဆိုလိုသည်။ ဤရွေ့ကားဟေဗန်ဆွစ်ဇာလန်, အကေမန်ကျွန်းစုဘေလီဇ်နှင့်လူဇင်ဘတ်တို့ပါဝင်သည်။ အကျိုးဆက်။
ကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ဖူးသလိုပဲ, ပင်လယ်ရပ်ခြားတစ်ဦးဘဏ်အကောင့်ကိုသုံးပြီးသင့်ရဲ့ပြည်တွင်းအကောင့်ကို အသုံးပြု. ဆင်တူသည်။ ဒါကရေခြားမြေခြားဘဏ်များ ATM စက်နှင့်အွန်လိုင်းအကောင့်စီမံခန့်ခွဲမှုမှတဆင့်အလွယ်တကူရရှိနိုင်ပါသည်။
တရားစွဲဆိုမှုကနေ Enhanced ပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်း
ဒီနေရာတွင်ဘဏ္ဍာရေးသီးသန့်တည်ရှိမှုနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုတိုးမြှင့်ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုတဦးတည်းကြီးမားသောအစွန်အဖျားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကဖြစ်ပါသည်, တစ်ဦးကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီ၏နာမ၌တစ်နိုင်ငံရပ်ခြားဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်။ ဤသည်ကိုသိသိသာသာတိုးမြှင့်ဘဏ္ဍာရေးလျှို့ဝှက်ပေးပါသည်။ သင့်ရဲ့ privacy ကိုတိုးမြှင့်နှင့်သင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်နည်းလမ်းများ၏နံပါတ်ရှိပါသည်။ ရိုးရှင်းစွာအကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်များကုမ္ပဏီများနှင့်ကိုး စား. ပေါင်းစပ်။ ဥပမာ, နေးဗစ် LLC အထုံးအဖွဲ့တို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်များတွင်မဆို LLC ၏အပြင်းထန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုဆက်ကပ်။ ထို့အပွငျအမှုဥပဒမဆိုအမျိုးအစားအထိရောက်ဆုံးကမ်းလွန်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိရိယာတခုအဖြစ်ကွတ်ကျွန်းစုများယုံကြည်ကိုးစားပါရန်ထောက်ပြသည်။
သင်သိအတိုင်း, သင်တို့၏စည်းစိမ်သည်နှင့်ဘဏ္ဍာရေး privacy ကိုကာကွယ်ကိုပိုမိုအရေးပါသောကဏ္ဍတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်ဘယ်တော့မှသိရသည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, သင်လုံခြုံဆုံးကမ်းလွန်တရားစီရင်မှုအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောလုံခြုံရေးနှင့်လွတ်လပ်ခွင့်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးမော်တော်ယာဉ်ကိုခံစားနိုင်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောကျွန်တော်တို့ကိုအဖြစ်ပံ့ပိုးပေးနေ့တိုင်းသူတို့ရဲ့ client များအတွက်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများနှင့်ကိုး စား. ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ သူတို့ရဲ့သစ်ကိုပိုင်ရှင်တွေ, အလှည့်၌, နိုင်ငံရပ်ခြားဘဏ်ထဲမှာဒေါ်လာသိုက်သန်းပေါင်းများစွာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအကောင့်။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့အပြင်းထန်ဆုံးဘဏ်များများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီ introducer အဖြစ်, ဒီအဖွဲ့အစည်းကကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်အတူအခြားသူများကိုထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကူညီခဲ့သည်။ ဒီအဖွဲ့အစည်းကသူတို့ကိုတစ်နိုင်ငံရပ်ခြားဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ကူညီပေးသည်ဖြစ်ပါသည်။ အတွေ့အကြုံပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းကိုဦးဆောင်လာသောအခါကဲ့သို့သော, သင်ကအနိမ့်ကနဦးသိုက်သူတို့နှင့်အတူဖွင့်လှစ်နိုင်ပါ။
အဆိုပါ IRS ကို အမေရိကန်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဝင်ငွေပေါ်လူတွေအခွန်။ ဒါကြောင့်သင်အခှနျအကွံဉာဏျအသံပေးနိုင်သူတစ်ဦးတကြ် CPA ၏လမ်းညွှန်မှုကိုရှာကွသေချာပါစေ။ သငျသညျပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ရာအတွက်ဥပဒေဆိုင်ရာလမ်းရှာကြသည်ပါသလား? သင်တစ်ဦးကျင့်ဝတ်နှင့်တရားဝင်လိုက်နာဖက်ရှင်အတွက် operating ပါသလား? သို့ဆိုလျှင်ဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိထောက်ပံ့ပေးသူအရေအတွက်သို့မဟုတ်ပုံစံကိုသုံးစွဲဖို့အခမဲ့ခံစားရသည်။
အထက်ပါကုမ္ပဏီနှင့်ဘဏ်အကောင့်မှသာတရားဥပဒေဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုသောဥာဏ်နှင့်တကွဟုဆိုသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အမေရိကန်ကလူကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဝင်ငွေအပေါ်အခွန်ကောက်နေကြသည်။ နှင့်လိုက်အောင်အနေဖြင့်ဒီတော့ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, vexatious တရားအရှိဆုံးဖြစ်ရပ်အတွက်လက်ခံနိုင်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်အခွန်ရှောင်မှုကိုသို့မဟုတ်တရားမဝင်ဝယ်ယူရန်ပုံငွေများကာကှယျပေးဖို့အထက် အသုံးပြု. ဤဆောင်းပါး၏ရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ငါတို့သည်သင်တို့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူဥပဒေ-လိုက်နာနိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်းယူဆ။ ဟုတ်ကဲ့လျှင်, အထက်န်ဆောင်မှုအသုံးချဖို့သင်ရှာကြသည်သောဘဏ္ဍာရေးနှစ်ရဲ့ privacy နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုပေးလိမ့်မည်။
> ကျအခနျး9မှ